ဘဏ္ဍာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အောင်မြင်ရန်လုပ်နည်း | binary Option ကိုထရေးဒင်း - စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing
သင်သည်သင်၏အသက်တာကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကြိုးစားနေကြသောအခါ, တာဝန်များကိုသငျသညျကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်။ ပြောင်းလဲမှုကိုမကြာခဏထိုကဲ့သို့သောကြီးမားတာဝန်နဲ့တူခံစားရ၏။ အထူးသဖြင့်ကပိုက်ဆံမှကြွလာသောအခါ။
သငျသညျအဘယ်မှာရှိ start သလဲ? အဆိုပါနံပါတ်များကိုရေကူးပုံရသည်။ သငျသညျအဘယ်သူမျှမအဖြေတွေကိုရှိသည်။ သင်သည်အဘယ်မှာသူတို့ကိုတွေ့ပါလိမ့်မည်နည်း
ကတိတော်များနှင့်ကြီးမားသောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုပြုလုပ်ခြင်းလွယ်ကူပါတယ်။ သင်နှင့်သင့်မိသားစုများအတွက်သင့်ငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျစီစဉ်ကြောင့်သင်လုပ်ချင်တဲ့အားလုံးပြောနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါအယူအဆကိုသင်သည်အမှုအရာကိုဆင်းချိုးဖျက်ဖို့ရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ ကတစ်ကြိမ်ခြေလှမ်းကိုယူပါ။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုစာရင်းအစီအစဉ်တစ်ခုဖန်တီးပါ။ သင့်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးပြောင်းခြင်းခြေလှမ်းတို့ကခြေလှမ်းလာပါတယ်။ သငျသညျရိုးရိုးကအားလုံးကိုနေ့ချင်းညချင်းဖြစ်ပျက်လုပ်လို့မရပါဘူး။ သငျသညျခြေလှမ်းကအချိန်ပေးနဲ့ခြေလှမ်းသွားကြဖို့ရှိသည်။
သိမ်းဆည်းခြင်းအဖြစ်ကောင်းစွာခြေလှမ်းတို့ကခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်လာစျေးနှင့်တစ်ပြားအားဖြင့်တစ်ခါတစ်ရံတစ်ပြားအားဖြင့်ဒေါ်လာ။ ဒါဟာသင်တိုးတက်မှုလုပ်နေပါတယ်သိမြင်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ ဒါပေမယ့်နည်းနည်းခြေလှမ်းများနှင့်အချိန်အများကြီးအများကြီးပေးထား, သင်ကအားလုံးဖွင့်ဖြည့်စွက်ဘယ်လိုမြင်လိမ့်မည်။
အဆိုပါပြဿနာကိုသင်အာရုံစိုက်နှင့်လှုံ့ဆော်နေရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ ရိုးရှင်းစွာအတစ်ခုချင်းစီကိုသေးငယ်ခြေလှမ်းအာရုံစိုက်ပါ။ ပြည့်စုံကြောင်းတစျဦးစီနှင့်အတူသင်နောက်တစ်ဆင့်ပေါ်သို့ရွှေ့ဖို့ drive ကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်။ သင်အချိန်ကန့်သတ်ပေးလိမ့်မည်ဟုယေဘုယျပန်းတိုင်များသတ်မှတ်မည်။
ငါသည်သင်တို့ကိုထိုင်နှင့်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဦးထက်ပိုနာရီအဘို့သင့်ဘဏ္ဍာရေးကိုကြည့်ဘယ်တော့မှကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သင်ရုံလွှမ်းနှင့်အလေးပေးရလိမ့်မယ်။ အချို့လူများကတစ်လိပ်ပေါ်ရ။ သင်တစ်ဦးချိုးယူနှင့်ကတစ်ရက်ပေးနိုင်ကြသည်သည်အထိအလုပ်လုပ်ကြသည်။
သငျသညျအိပ်ရာမဝင်ခင်မှာသင့်ရဲ့ငွေကြေးအပေါ်အလုပ်မလုပ်ကြပါဘူး။ သငျသညျညဉ့်သို့စဉ်းစားခြင်းနှင့်စီစဉ်ခံရဖို့မလိုချင်ကြဘူး။ သငျသညျကောင်းစွာအိပ်ချင်တယ်။ စက္ကူပေါ်တွင်သင်၏အတွေးအခေါ်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များနှင့်နံပါတ်များထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ထိုအရပ်၌သူတို့ကိုစွန့်ခွာ။ သငျသညျမှထင်ကြသောအခါသင်ကအလုပ်လုပ်နေကြသည်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ထားပါ။ နေ့စဉ်ပန်းတိုင်များဖြစ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ရိုးရှင်းသောသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်လော့။ သင်သည်သင်၏စာရင်းကိုအပေါ်အောက်ပါအချက်များကိုရှိသည်နိုင်:
ခေါ်ရန် ခရက်ဒစ်ကဒ် အနိမ့်အတိုးနှုန်းများအတွက် #1 ။
ပုံမှန်မဟုတ်သောခရက်ဒစ်ကဒ်အကောင့် #1 ကိုပိတ်လိုက်ပါ။
ရောင်းရန်မော်တော်ဆိုင်ကယ် Advertise ။
တူသောသူတဦးတက္ကစီမောင်းသူ "သင်လာမယ့်ရက်ပေါင်းမုန့်ညက်များကိုပိုက်ဆံမရှိဘူးအခါ, သင်ပင်သင်၏မယားနှငျ့ကောငျးသောညဥ့်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းကိုခံစားလို့မရဘူး!" ငါ့အားပြောဆို၏
သင်တို့သည်လည်းအားလုံးသင့်ရဲ့အကြွေးတွေ, ထိုငွေပေးချေမှုပမာဏ, ချိန်ခွင်နှင့်အတိုးနှုန်းများစာရင်းကိုလုပ်သင့်ပါတယ်။ နိမ့်ဆုံးအတိုးနှုန်းမှအမြင့်မားဆုံးအကျိုးစီးပွားကနေစာရင်း။ ထိပ်မှာ Start နဲ့သူတို့ကိုပယ်ပေးဆောင်ခြင်းကိုစတင်ပါ။ သူတို့ရောင်းချသည့်အခါထိုကဲ့သို့သောအထက်မော်တော်ဆိုင်ကယ်အဖြစ်သင်သည်သူတို့၏မှတ်ချက်ချွတ်ဆပ်ဖို့ရောင်းချလိမ့်မည်ဟု items, ရိုးရှင်းစွာပယ်ပေးဆောင်ရပါမည်။ မဆိုပိုလျှံငွေစာရင်း၏ထိပ်ဆုံးအပေါ်ကြွေးမြီကိုသွားသင့်တယ် - ဒါဟာလုံးဝစာရင်းထဲအပေါ်တစ်နေရာရာမှာတစ်ဦးကြွေးမြီကိုချွတ်ပေးချေမည်မဟုတ်လျှင်။ အရာအမှု၌, သင်ရုံရှေ့ကိုသွားနှင့်ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရသင့်ပါတယ်။
နည်းနည်းအားဖြင့်ခြေလှမ်းအနည်းငယ်သာအားဖြင့်ခြေလှမ်းက Keeping လွှမ်းမိုးဖြစ်လာမှသင်တို့ကိုကူညီပေးပါမည်။ သတိရပါကအားလုံးကိုယနေ့ပြီးစီးမရနိုင်, ဒါကြိုးစားနေအရူးကိုယ့်ကိုကိုယ်မောင်းကြဘူး။ ယူအားလုံးသည်တညဉ့်တစ်နာရီဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ္ဍာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအချိန်နှင့်အပျနှံလာပါတယ်။
နက်ရှိုင်းသောဘဏ္ဍာရေးဒုက္ခ၌နေသောလူများအတွက်, မရရှိနိုင်ပါကအကူအညီလည်းမရှိ။ အကြွေးအကြံပေးခြင်း မှစ. Self-အကူအညီနဲ့စာအုပ်တွေရန်, သင်ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲကူညီဖို့နည်းလမ်းရှာနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဘဏ္ဍာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုရယူနှင့်အတူကိုင်တွယ်ကြောင်းနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုပူဇော်သည်ဟုကုမ္ပဏီအများအပြားလည်းရှိပါသည်။ ဤရွေ့ကားနှီးနှောဖလှယ်ပွဲများသောအားဖြင့်ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်ဘဏ္ဍာရေးကျွမ်းကျင်သူများကနေဖြင့်ကျင်းပကြသည်။
ဤအနှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွေဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသောပစ္စည်းအမျိုးအစားများကွဲပြားခြားနားသောဆွေးနွေးပွဲများအကြားကွဲပြား; သို့သော်အများဆုံးတူညီဆောင်ပုဒ်ရှိသည်။ သူတို့ကသင့်ရဲ့ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်မည်သို့ဘတ်ဂျက်သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံမှပေါ်တွင်သင်ပညာပေးအကြောင်းကိုအားလုံးဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုလည်းရေရှည်ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှုပေါ်တွင်သင်ပညာပေးအဖြစ်သင်၏သားသမီးရဲ့အနာဂတ်အတွက်စီစဉ်နိုင်ပါတယ်။
ဘဏ္ဍာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအောင်မြင်ရန်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အခါ, မခွဲခြားဘဲတစ်ဦးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုသင်ပြောပြနိုင်အခွားအဘယျသတင်းအချက်အလက်, အရေးအပါဆုံးခြေလှမ်းကွာကြွေးမြီထံမှရရန်ဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏အကြွေးအားလုံးချွတ်ပေးဆောင်ကြပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့ဘဝဤမျှလောက်ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့တစ်ခုတည်းသောတာဝန်ကြွေးမြီထဲကနေရလိမ့်မည်။ ဤအဆွေးနွေးပွဲများအလွန်အသုံးဝင်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်နေရာအရပ်ဖြစ်၏။ ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှုပေါ်တွင်သင်ပညာပေးသည်ဤနှီးနှောဖလှယ်ပွဲအတွက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအရေးပါတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
မည်သို့ပင်သင်ဘဏ္ဍာရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကနေလေ့လာသင်ယူရာ၏, ဘဏ္ဍာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအစဉ်အမြဲသင့်ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုအပေါ်မှီခိုသည်။ သငျသညျဆန္ဒသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အကြံပေးချက်ကိုအောက်ပါနိုငျလျှင်၎င်းသည်ဤလူကိုသင်သင်ပေးဘယ်လောက်အရေးမဟုတ်ဘူး။ သငျသညျဘဏ္ဍာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအောင်မြင်ရန်ချင်လျှင်သင်ကအလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အခြားမည်သူမျှသင်တို့အဘို့ထိုသို့ပြုနိုင်ပါတယ်။ သင်သည်သူတို့၏အကြံဉာဏ်ကိုလိုကျနာနှင့်သင့်ဘဏ္ဍာရေးကနေလွတ်လပ်ခွင့်ကိုမှီဖို့ဆုံးဖြတ်ထားဘူးဆိုရင်, သင့်ဘဝကိုပျြောရှငျအဖြစ်စီမံခန့်ခွဲရန်ပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည်။
ဘဏ္ဍာရေးလွတ်လပ်ခွင့်မှ3သော့ချက်များ
သင်လိုချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဦး $ 100 သို့မဟုတ်တစ်သန်းကိုသင်မှတက်သည်။ သို့သော်နေပါစေသင်လိုအပ်သောအရာကိုသင့်ရဲ့အနေအထားသို့မဟုတ်သိမ်းပိုက် ဘဏ္ဍာရေးလွတ်လပ်ခွင့်။ ယခုအဘယ်အရာကို ဘဏ္ဍာရေးလွတ်လပ်ခွင့်? စုစုပေါင်းတစုံတယောက်သောသူသည်လူတဦးဘဏ္ဍာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုဆည်းပူးရန်လိုအပ်နေပါသည်အဖြစ်ထူထောင်နိုင်ပိုက်ဆံပမာဏရှိပါတယ်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ဘာကိုဆိုလိုတယ်အလုံအလောက်ရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် ပိုက်ဆံ ဒါကြောင့်သင်ကပိုက်ဆံစိတ်ပူနေကြသည်မဟုတ်။ သင်တို့ရှိသမျှသောအသင်တို့အဘို့ကိုဆိုလိုသမျှကိုသင်အသက်တာ၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များများကိုလိုအပ်သောငွေကို,, ပြီးတော့အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ဘေးဖယ်ထားအချို့ငွေပမာဏကိုလိုအပ်ပါတယ်။
ကောင်းပြီဒါကြောင့်သူတို့ကစီးပွားရေးလုံခြုံရေးအတွက်လိုအပ်မယ့်မည်မျှလူတို့အဘို့အထဲကသတ်မှတ်ထားဖို့ကြိုးစားနေတစ်လှည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်သင်ငွေရေးကြေးရေးအခမဲ့ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်အရာကိုကိုယ်အဘို့ကိုဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ပါတယ်။ အမြဲပိုက်ဆံစိတ်ပူနေကြသည်လျှင်သင်ဘဝကိုခံစားလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှင့်ဤအစွမ်းကုန်အရေးပါမှုသည်။
1.ပိုက်ဆံတစ်ဦးနှင့်ငွေပမာဏကို Set သင်ကသငျသညျ attaint သို့မဟုတ်သင်ချင်နေတဲ့စုစုပေါင်းငွေပမာဏဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့နှစ်စဉ်ဝင်ငွေရုံသငျ့စိတျထဲမှာ set ကချရေးဖြစ်ရှိမရှိ, လိုအပျကွောငျး။ ဒီအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သင့်ရဲ့စိတ်ကိုသိမ်းဆည်းထားပါနှင့်ဘယ်တော့မှပုံကွာလည်းညှိုးနွမ်းကြကုန်အံ့။
2.Set တစ်ဦး စီမံကိန်း ပမာဏကိုဆည်းပူးဖို့ ပိုက်ဆံ သငျသညျအလိုရှိကြသည်။ သင့်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြာမြင့်စွာမဖွစျလိုအပျသပေမယ့်သင်တဦးတည်းတည်ထောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာအချည်းနှီးအရာတစ်ခုခုကိုအဖြစ်အဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သောအရာသည်နှင့်သင်ဆည်းပူးချင်သောပိုက်ဆံပြန်အသုံးဝင်သောဝန်ဆောင်မှုဆပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသင်၏စိတ်တွင်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုရယူပါ။ Earl Nightingale သည်ငါတို့အဘို့များစွာသောကျွန်တော်ငွေရှာချင်ကြောင်းပြောနေသဖြင့်မှားရသူကပြောပါတယ်။ အဆိုပါ Mint အတွက်ပိုက်ဆံအလုပ်လုပ်သူသာလူများ, Earl ကပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို၏ကျန်ထိပ်တန်းငွေရှာပါပြီ။ ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏သူ၏အဆုံးထုတ်ကုန်ရုံတစ်ခုခုလုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူကိုယ့်ကိုပြုမည်ကိုထုတ် ထား. လူမျိုးကိုအသုံးဝင်သောဖြစ်မယ့်အချို့တည်ထောင်ခြင်းအတွက်လုပ်ခလူသို့မဟုတ်အလုပ်အကျိုးရှိမည်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချသွားရှိမရှိအသုံးဝင်သောဝန်ဆောင်မှုဆပ်ဖို့ပြင်ဆင် ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့
3.Next သင်သည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် ပိုက်ဆံအကြောင်းကိုသင့်ရဲ့သဘောထားကိုပြောင်းလဲစေ သင်အမှန်တကယ်ကပိုရချင်တယ်ဆိုရင်။ ပိုက်ဆံသူအပေါငျးတို့clichéအကြောင်းကိုမေ့လျော့ဘေးဥပဒ်အပေါင်းတို့၏အမြစ်နှင့်တူ၏။ အရောင်းရဆုံးစာရေးဆရာက Denis Waitley ဒီမဟုတ်ဘဲ "ငွေကိုတပ်မက်ဘေးဥပဒ်အပေါင်းတို့၏မူလအမြစ်ဖြစ်" ပြောပါတယ်တဲ့ကလုံးဝ misquoted အသက်အရွယ်ဟောင်းသည်ပညာကိုကြောင်း opines ။ သင်တို့သည်လည်းသင်ဥပဒေရေးရာနည်းလမ်းများမှတဆင့်ဆည်းပူးဖို့ပစ်မှတ်ထားခဲ့ကြသောငွေရလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံစုဆောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထင်ရှားဆုံးတကယ်တော့သော်လည်းအချိန်ကဲ့သို့ရိုးရှင်းပြီးကဲ့သို့ဟောင်းနွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဝင်ငွေကြောင့်လျော့နည်းဖြုန်း! အဘယ်သူမျှမကိစ္စသင်သည်သင်၏အသုံးစရိတ်သင့်ဝင်ငွေတစတစတော်မမူကြောင်းဤကဲ့သို့သောလမ်း၌သငျဘတ်ဂျက်သင့်ဝင်ငွေရပါမည်စည်းစိမ်ကိုဆည်းပူးချင်လျှင်, သင်ဘယ်လောက်ကြွယ်ဝသောသို့မဟုတ်ဆင်းရဲသားကို။
အဲဒီမှာအခုသင်ကသူတို့ကိုရှိသည်။ သုံးတာသေချာပါနဲ့ရိုးရိုးခြေလှမ်းများမှ ဘဏ္ဍာရေးလွတ်လပ်ခွင့်။ ရှေ့ဆက်သွားနှင့်သင့်နေ့စဉ်ဘဝများတွင်ဤအခြေခံမူအလုပ်လုပ်နှင့်ငွေမကြာမီသင့်ရဲ့ပြဿနာဖြစ်ငြိမ်းလိမ့်မည်။
Tags: ရွေးချယ်စရာကုန်သွယ်ရန်လမ်းညွှန်, ဒွိကုန်သွယ် option ကို, ထို binary ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း, ဒွိကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ, ရှေးခယျြစရာကုန်သွယ်, ကုန်သွယ်ရွေးချယ်စရာအရင်ကဆိုရင်, ကုန်သွယ်ရွေးချယ်စရာပွဲစားများ, အရင်ကဆိုရင်အဘို့ကုန်သွယ် options များ, ကုန်သွယ်ရွေးချယ်စရာလမ်းညွှန်, ကုန်သွယ်ရွေးချယ်စရာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ, တစ်ဦး binary ကုန်သွယ်ကားအဘယ်သို့, တစ်ဦး binary ကုန်သွယ်မှုစနစ်ကဘာလဲ